Guinea: Dhoofinta ugu horreysa ee bauxite ee GAC - JeuneAfrique.com - WAA KU SAABSAN SAAMAYNTA
ACCUEIL » DHAQAALAHA Guinea: dhoofinta bauxite ugu horeysa ee GAC - JeuneAfrique.com
Haysta haynta macdanta ee waqooyi-galbeed ee dalka, Guinea Aluminum Corporation (GAC) ayaa dhoofisay kaliya 70 000 tan koowaad ee bauxite. Shirkadda hoosaadka ee Emirates Global Aluminum waxay ku talajirtaa inay kordhiso wax soo saarkooda sanadlaha ah ilaa 12 milyan oo tan iyadoo diiradda la saarayo dib u soo nooleynta suuqa aluminium.
Wadada soosaarka ah ee Boké, oo ku taal waqooyi-galbeed Guinea, hadda waxay noqon doontaa lagama maarmaan in lagu xisaabiyo tiirarka iyo goosashada tareenka Shirkadda Guinea Alumina Corporation (GAC), oo ah shirkad laga leeyahay Emirates Global Aluminum (EGA), oo u dhaxaysa miinada Sangarédi iyo dekada Kamsar ore.
Labada geesood waxaa ku xiraya wado tareen ah oo loo yaqaan '135 km,' waa istcimaal guud oo udhaxeeya GAC ​​iyo heshiiskii dhaqameed ee ay laheyd shirkada bauxites ee Guinea (CBG). Wadada tareenka waxaa iska leh Gobolka, kaas oo ku maareysa hay'adda Qaranka ee Horumarinta Kaabayaasha Macdanta (Anaim). Cayaaryahanka kale ee garoonka ku jira waa shirkadda weyn ee loo yaqaan 'SMB (Shirkadda Boké Mining Company).
Dhanka EGA, soo iibsashada 2013 ee dhimiskan, muddo labaatan iyo shan sano ah la cusbooneysiin karo mar, waxay ka jawaabtaa istiraatiijiyad lagu hubinayo silsiladda sahaydeeda sare. Soo-saarka, oo ahaa inuu bilowdo bilowgii 2017, ayaa dib u dhacay, maaddaama xoojinta kaabayaasha ay qaadatay waqti.
Markay tahay dabkeeda, dabka Guinea Alumina Corporation wuxuu u dhoofiyay Imaaraadka Carabta 5 Agoosto 70 000. Waxay ku xisaabtameysaa heerka soo saarista sanadlaha ah ee 12 milyan oo tan, marka wajigan bilowga ah uu dhammaado.
Markabkii ugu horreeyay ayaa tagay wiiggii hore. Waxaan ku jirnaa marxaladda komishanka. Hawlahayagu si tartiib tartiib ah ayey u socdaan laakiin waa hubaal. Doonta labaad ayaa la filayaa usbuuca soo socda Dhallinyarada Afrika Martin Simard, agaasimaha isgaarsiinta ee GAC. Mashruucu wuxuu abuuri doonaa 700 milyan oo doollar (628 milyan oo yuuro) oo sidaas daraadeedna u kobcin doona GDP-ga qaran, iyada oo ku dhawaad ​​1 000 shaqooyinka wejiga hawlgalka. "
Qiimaha aluminiumka ayaa maraya heerkiisii ​​ugu hooseeyay, laakiin waxaan ognahay inay tahay xaalad ku meel-gaadh ah
Khubarada takhasuska leh waxay saadaalinayaan suuq ku habboon 2026. "Qiimaha aluminiumka ayaa maraya heerkiisii ​​ugu hooseeyay [tan ayaa hoos uga dhacday 2 250 ilaa $ 1 850 dollars inta u dhexeysa Oktoobar 2018 iyo July 2019]. Waxaan ognahay inay tahay xaalad ku meel-gaar ah. Aragtida ayaa ah mid aad u fiican, ayuu yidhi Martin Simard. Aboubacar Akoumba Diallo, oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha macdanta ayaa yidhi "Suuqa wuu xoojinayaa."
Waxay ku yaalliin degmada Tanéné, Sangédi Sub-prefecture (Boké), Guinea Alumina Corporation macdanta hoos u dhigga 690 sq. Km. GAC waxaa lagu aasaasay 2001 oo hoos yimaada magaca Global Alumina wuxuuna noqday, tan iyo bishii May 2013, oo ah hanti gaar u ah Emirates Global Alumina (EGA), oo ah shanaad ee ugu weyn adduunka ee aluminium ah. Wejiga Labaad ee mashruuca GAC ​​ee Guinea wuxuu diiradda saarayaa dhismaha iyo hawlgalka dib-u-warshadaynta aluminiumka ee Kamsar. Feyl ay saraakiishoodu taxaddar ka muujinayaan inay wax ka qabtaan, iyagoo hubinaya in mashruuca aan la aasin.
Yaoundé: qiirsashada korantada ka dib burburin baaxad leh waxay dadka ku dhex abuuraysaa dhibaato